Isikhokelo sikaNoob kuThengiso kwi-Intanethi | Martech Zone
NgoLwesine, Septemba 29, 2011 Lwesine, Okthobha 27, 2011 Douglas Karr
Nangona le infographic isithi yi noob isikhokelo, eneneni kukujonga okuqinisekileyo kwizicwangciso ezichaphazelekayo ekuphuhliseni isicwangciso sokuthengisa esingenayo kwi-intanethi. Imijelo echaziweyo ibandakanya ukuthengisa nge-imeyile, ukuvelisa okukhokelayo, ukukhangela okuphilayo, ukukhangela okuhlawulelweyo, imithombo yeendaba zentlalo, ukwenziwa kunye kubahlalutyi. I-infographic iyamangalisa-kwaye uluhlu olukhulu lokutshekisha kuyo yonke intengiso ye-Intanethi.
Ukwamkelwa okubonakalayo kuphela kwi-infographic sisicwangciso sobudlelwane boluntu. Isitshixo kwisiseko sayo nayiphi na into ekhoyo kwi-Intanethi yamkelwa ngoontanga bakho. Iinkampani zonxibelelwano noluntu ezifana nezethu, I-Dittoe PR, ziinkosi ekufumaneni amathuba ngoshicilelo oluphambili kunye nobuntu.
Unbounce -Iplatifomu yokuHamba kwe-DIY
I-infographic yaphuhliswa ngu Unbounce. Unbounce yinkonzo eyenzelwe wena ebonelela abathengisi benza uphando oluhlawulelweyo, iintengiso zebhanile, i-imeyile okanye intengiso yemidiya yoluntu, eyona ndlela ilula yokwenza, ukupapasha kunye nokuvavanya ukukhuthaza amaphepha athile okufika ngaphandle kwesidingo se-IT okanye ababhekisi phambili.
I-Facebook yiNdlu yeFrat, kuGoogle + ubuSorority
Okt 1, 2011 ngexesha 10:34 AM
Enye yezona zinto zibalaseleyo endizibonileyo kumaxesha akutshanje. Ulwazi olumangalisayo lubhalwe kwi-infographic enye, iminqwazi kuyilo.
Okt 1, 2011 ngexesha 10:48 AM
Nam bendicinga njalo, Robert! Nangona ndinqwenela ukuba kubekho iindlela zokwenza ukuba ifundeke ngakumbi kubungakanani obuncinci.
Okt 2, 2011 ngexesha 7:37 AM
Umzobo omangalisayo! Ndifuna ukuhamba wonke umxhasi ngamanyathelo! Indlela ephefumlelweyo yokujonga yonke into eyimfuneko yokukhaba ukuqala kokutyhala kwezentlalo.